2019 Current High Speed ​​Ticket Prices Timetables na Timetables - RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 Ankara2019 High Speed ​​Current High Speed ​​Train Schedules na Nhazi
16 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, 11 Bilecik, 26 Eskisehir, 34 Istanbul, 42 Konya, Central Anatolia Region, Usoro okporo ụzọ okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey 1
2019 ụgbọ ala ụgbọ oloko ala
Oge ihe nrịba ọsọ nke tiketi njem nke 2019 dị ugbu a na njem: ụgbọ oloko na-agba ọsọ nke na-eme ka ndụ anyị dị mfe na njem ụgbọ elu na-aga n'ihu na-ejikọ obodo, ndị njem na ọdịbendị dị iche iche. A na-eji ụgbọ oloko na-agba ọsọ dị elu na-eje obodo dị iche iche nwere njiri njem dị iche iche na ụdị ụgbọ ala na nnukwu ofufe ma nwee atụmatụ teknụzụ dị elu. CDgbọ njem TCDD na-enye gị ohere njem a na-agaghị echefu echefu site na ijikọ ihe niile na mmepe nke teknụzụ na mpaghara a n'ụzọ kachasị ọsọ.
Tragbọ okporo ụzọ dị elu, nke na-enye gị ohere iru obodo ahụ n'oge dị mkpirikpi karịa ụgbọ ala ma na-eme njem n'ụzọ akụ na ụba, kewara ụzọ atọ: pulman, azụmahịa na nri abalị. Usoro tiketi TCDD Transportation na ntanetị ma ahọpụtasịrị tarifu ị nwere ike ịhọrọ ụgbọ ala ịchọrọ ịga. Ebe ọ bụ na enweghị ụgbọ ala maka ụgbọ ala nri, ọ dịghị ere tiketi ọ bụla maka ụgbọ ala a. You nwere ike iri nri na ngalaba a ma zụta nri site na kọlọ.
A na-ewepu ụgbọ na Bursa, Antalya, Karaman site na TCDD Transportation maka njem dị mfe iji sụgharịa ụgbọ oloko si n'obodo ụfọdụ. Ndị dị nso na ọdụ ụgbọ elu dị iche iche iji mee ihe n'ụzọ dị otú a ma banye ụgbọ okporo ígwè awara anya site n'obodo ndị a. Njikọ ndị a,
Busị na Karaman - Ụgbọ okporo ígwè Konya High Speed
Akwa ụgbọ oloko dị elu pụkwara irite uru site na ego dị iche iche. Ego ndị a dị iche n'etiti 20% na 50%.
Ndị na-azụta tiketi na-aga njem site na otu ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na-abanye ma nweta ọdụm ga-enweta 20 ego na tiketi ụgbọ oloko dị elu.
Ndị dị n'agbata afọ 13 na 26 na-anata 20% ego n'ihi na ha na-akwụ ụgwọ ego nwata.
Ndị nkụzi site na Ministry of Education nwere ikike ịkwụsị 20 n'agbanyeghị na ha bụ ụlọ akwụkwọ nzuzo ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ọha na eze. Ndị a na-agụnye ndị isi na ndị isi na ndị isi na ndị mahadum, mahadum na mahadum mahadum, na ndị nkụzi nke mba Turkey ndị na-arụ ọrụ ná mba ọzọ.
A na-etinyekwa ego na 20% maka ndị ọrụ agha na NATO na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na ndị agha Turkey.
Ndị otu 12 ma ọ bụ 12 na-azụta ịzụta tiketi nwere ikike inweta ego ego 20.
Ndị njem nọ n'agbata afọ 60 na afọ 65 nwere ikike ịkwụsị 20.
Ndị njem n'elu afọ 65 nwere ikike ịkwụ ụgwọ 50.
Ndị nwe ụlọ ma ọ bụ ndị nnọchiteanya mba ọzọ nwere ikike inweta 20% ego na kaadị ndị Gọọmenti General nke Publication Information bipụtara.
Ndị ọrụ TCDD na ezinụlọ ha (di na nwunye na ụmụaka) na-akwụ ụgwọ ego 20.
Ụmụaka nọ n'okpuru afọ 7-12 natara ego% 50% ụmụaka Ụmụaka nọ n'okpuru afọ 7 adịghị akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ha anaghị aga njem na njem njem ọzọ.
Anyị ejikọtala n'okpuru ụgbọ oloko dị elu ndị e mere ma rụọ ọrụ maka ụmụ amaala iji ruo obodo ha ga-aga ngwa ngwa na ụfọdụ n'ime atụmatụ nke ụgbọ okporo ígwè ndị a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị nwere ike ịkpọ TCDD Transportation ma ọ bụ ị nwere ike ịmalite ịmalite njem njem a dị mma ma nwee ihe ịga nke ọma site na ịzụta tiketi gị ozugbo na ọnụ ahịa ahịa kachasị mma na ntanetịime ịntanetị.
16 July July Train Speed ​​Speed ​​si 2019 (YHT)
Daybọchị ọ bụla site na Bilecik ruo Istanbul, 08.09-11.49-14.44-19.09,
Kwa ụbọchị site na Bilecik ruo Konya, 09.59- 15.18- 21.14,
Kwa Ubochi site na Bilecik rue Ankara 09.11-11.39-15.54-17.56-19.42-20.18
ga-eme ihe n’ụdị.
Izmir Antalya Nnukwu Uzo Zuru Oke
Ọkụ Ankara-Istanbul High Speed ​​na-arụ ọrụ 6 kwa ụbọchị n'etiti Ankara-Istanbul na Istanbul-Ankara. Ụgbọ ụgbọ okporo ígwè Ankara-Istanbul na-apụ site na Ankara na-akwụsị na Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit na Gebze kwụsịrị ma bịarute na Pendik n'ihe dịka 4 awa na 15 nkeji. Ankara-Istanbul Ụgbọ okporo ígwè dị elu adịghị akwụsị na ụfọdụ n'ime nkwụsị n'oge ụfọdụ nke ụgbọ okporo ígwè ahụ rutere nwere ike ime mgbanwe.
HERE HERE Ị BỤ N'ỤLỌ NKWU N'OGWU gbasara ANKARA ISTANBUL YHT
Ankara Ankara YHT
Istanbul-Ankara High Speed ​​Train na-arụ ọrụ 6 kwa ụbọchị n'etiti Istanbul-Ankara na Ankara-Istanbul. Ụgbọ ala ahụ si Istanbul Pendik na-apụ na Ankara site na Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozuyuk, Eskisehir, Polatli na Sincan na 4 hour 15 nkeji. Ebe ọ bụ na ụgbọ oloko Istanbul-Ankara na-agba ọsọ adịghị akwụsị na nkwụsị ụfọdụ, enwere ike ịdị iche na nbata ụgbọ ala.
ISTANBUL ANKARA KỌKPỤKWU ỌZỌ N'OGE YHT
Ankara-Eskişehir High Speed ​​Train Ọ bụ otu n'ime nkwụsị na Eskişehir-İstanbul-Ankara Line. Enwere ike mee njem 5 site na akara a. Tụkwasị na nke ahụ, eriri Ankara-Eskişehir dịkwa. Ankara-Eskişehir High Speed ​​Train, nke bụ otu n'ime ụgbọ elu 6, na-eme njem 11 kwa ụbọchị. Ebe ọ bụ na oge a dị mkpụmkpụ, ọ dịghị nri ụgbọala dị na ya. Ebe ọ bụ na ọdụ ụgbọ okporo ígwè nọ n'obodo ahụ, njem dị n'etiti Ankara na Eskişehir na-ewe ihe dịka 1,5 awa. Kama ịga njem n'ụgbọ okporo ígwè a, ị nwekwara ike ịhọrọ akara Anlara - Istanbul. Mmadụ abụọ gafere n'otu nkwụsị.
KPERE HERE IHE ANYARA ANKARA ESKİŞEHİR YHT
Eskişehir-Ankara High Speed ​​Train Nke a bụ otu n'ime nkwụsị na Eskişehir-İstanbul-Ankara Line. Enwere ike mee njem 5 site na akara a. Tụkwasị na nke ahụ, a na-ahụkwa Eskişehir-Ankara line. Eskisehir-Ankara High Speed ​​Train line, nke bụ otu n'ime ụgbọ elu 6, na-eme njem 11 kwa ụbọchị. Ebe ọ bụ na oge a dị mkpụmkpụ, ọ dịghị nri ụgbọala dị na ya. Ebe ọ bụ na ọdụ ụgbọ okporo ígwè nọ n'obodo ahụ, oge a na-enye ndị njem ahụ ihe dị irè. Njem ahụ na-ewe nkezi nke 1,5 awa.
ESKİŞEHİR ANKARA KPERE KWUKWU OZI YA gbasara YHT
Ankara-Konya High Speed ​​Train na-agba ọsọ kwa ụbọchị. Ogologo oge nke njem ndị a bụ oge 7 na 1 nkeji. Sincan na Polatli na-akwụsị. Ị nwere ike ịhọrọ n'etiti tiketi abụọ, ọkọlọtọ na mgbanwe. Ụgbọ okporo ígwè ụgbọ elu 55 dị n'ụgbọ okporo ígwè na-agụnye otu 2 + 2 klas nke akụ na ụzụ na 2 + 2 nke ụlọ ahịa azụmahịa. Oge a bụ oge dị mkpirikpi, ya mere ọ dịghị ụgbọala na nri.
Pịa ebe a Maka ozi ndị ọzọ banyere ANKARA KONYA YHT
Usoro okporo ụzọ Konya-Ankara na-agba ọsọ kwa ụbọchị. Ogologo oge nke njem ndị a bụ oge 7 na 1 nkeji. Polatlı na Sincan na-akwụsị. Ị nwere ike ịhọrọ n'etiti tiketi abụọ, ọkọlọtọ na mgbanwe. Ụgbọ okporo ígwè ụgbọ elu 55 dị n'ụgbọ okporo ígwè na-agụnye otu 2 + 2 klas nke akụ na ụzụ na 2 + 2 nke ụlọ ahịa azụmahịa. Oge a bụ oge dị mkpirikpi, ya mere ọ dịghị ụgbọala na nri.
KPERE HERE IHE MKPASARA Gbasara KONYA ANKARA YHT
Konya-Istanbul High Speed ​​Train na-eme njem 2 kwa ụbọchị. Nkwụsị ikpeazụ nke ụgbọ oloko bụ Istanbul Pendik. Oge njem bụ oge 4 na minit 20. Ụgbọ okporo ígwè Konya-Istanbul na-akwụsị dịka Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Arifiye, Izmit na Gebze. Ị nwere ike ịzụta ụgbọ elu na nhọrọ abụọ tiketi na mgbanwe dị iche iche na ụdị 3 dị iche iche. Ụgbọ oloko ahụ gụnyere akụ na ụba pulman, azụmahịa nke ọkụkọ, ụgbọ ala azụmahịa nke ndị ahịa pulman na nri.
KPERE HERE IHE MKPỌTA Gbasara KONYA ISTANBUL YHT
Istanbul-Konya High Speed ​​Train na-agba ọsọ 2 kwa ụbọchị. Nkwụsị ikpeazụ nke ụgbọ oloko bụ Konya. Ụgbọ okporo ígwè ahụ mezuru njem oge na nkezi 4 hour 20 nkeji. Istanbul-Konya High Speed ​​Train na-agabiga Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozuyuk, ebe ndị Eskisehir n'otu n'otu. Ị nwere ike ịzụta ụgbọ elu na nhọrọ abụọ tiketi na mgbanwe dị iche iche na ụdị 3 dị iche iche. Ụgbọ oloko ahụ gụnyere akụ na ụba pulman, azụmahịa nke ọkụkọ, ụgbọ ala azụmahịa nke ndị ahịa pulman na nri. Ụdị tiketi ụgbọ ala na-adabere n'ụdị ụdị ụgbọala.
ISTANBUL KONYA YHT KPERE HERE IHE MKPASARA
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ịnwere ike ịkpọ TCDD Transportation (444 8 233) ma ọ bụ ị nwere ike ịmalite tiketi gị ugbu a ma nwee ọganihu a dị mma na ihe ùgwù site na ịzụta tiketi gị ozugbo na ọnụahịa kachasị mma.
Valid YHT maka njem site na ụbọchị 16.07.2019 Pịa ebe
16 Site na July 2019 maka Valid YHT Ịzụ ụgbọ na Bus Pịa ebe
Iji nweta High Speed ​​Train tiketi online Pịa ebe
TCDD Speed ​​Okporo ígwè Map of Turkey:
Akara Istanbul High Speed ​​Train Ticket Schedules and Schedule 12 / 07 / 2019 Site n'iwebata ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ ọsọ, ohere ịga njem dịkwuo mfe ma nwekwuo obi ụtọ. TCDD Transportation na-enye gị ohere njem na-enweghị atụ site na ijikọta ọganihu niile na nkà na ụzụ na mpaghara a n'ụzọ kachasị. Ankara-Istanbul High Speed ​​train runs between 6 kwa ụbọchị n'etiti Ankara-Istanbul na Istanbul-Ankara. Ụgbọ mmiri ahụ si Ankara na-akwụsị na Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit na Gebze kwụsịrị ma bịarute na Pendik n'ihe dị ka 4 hour 15 nkeji. Ankara-Istanbul Ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ adịghị akwụsị n'oge ụfọdụ, mana mgbe ọ bịarutere oge ụgbọ okporo ígwè ahụ ...
Istanbul Ankara High Speed ​​Train Ticket Schedules and Schedule 12 / 07 / 2019 Istanbul-Ankara YHT, otu n'ime ụgbọ oloko ndị na-agba ọsọ ụgbọ elu, emeela njem dị ukwuu n'obodo abụọ ndị a na-akwagharị na nnukwu okporo ụzọ. TCDD Transportation emejuputara ihe omuma na mmezu nke uzo na uzo a n'uzo kachasi ma nye ndi njem ya njem uzo na obi uto. Ụgbọ okporo ígwè Istanbul-Ankara High Speed ​​na-agba n'etiti 6 kwa ụbọchị n'etiti Ankara-Istanbul na Istanbul-Ankara. Ụgbọ ala ahụ si Istanbul Pendik na-apụ na Ankara site na Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozuyuk, Eskisehir, Polatli na Sincan na 4 hour 15 nkeji. Istanbul-Ankara High School ...
Ankara Eskişehir High Speed ​​Train Ticket Schedules and Schedule 12 / 07 / 2019 Akara Eskişehir High Speed ​​Train bụ otu n'ime nkwụsị na Eskişehir-İstanbul-Ankara Line. Ankara-Eskişehir ụgbọ oloko dị elu na-arụ ọrụ kwa ụbọchị. Enwere ike mee njem 5 site na akara a. Tụkwasị na nke ahụ, eriri Ankara-Eskişehir dịkwa. Ankara-Eskişehir High Speed ​​Train, nke bụ otu njem njem 6, na-eme njem njem 13 kwa ụbọchị. Ebe ọ bụ na oge a dị mkpụmkpụ, ọ dịghị nri ụgbọala dị na ya. Ebe ọ bụ na ọdụ ụgbọ okporo ígwè nọ n'obodo ahụ, njem dị n'etiti Ankara na Eskişehir na-ewe ihe dịka 1,5 awa. Kama ịga njem ụgbọ oloko a, ị nwekwara ike ịhọrọ akara Anlara - Istanbul. ...
Eskisehir Ankara High Speed ​​Train Ticket Schedules and Schedule 12 / 07 / 2019 TCDD Ụgbọ njem na-enye gị ohere iji oge dị n'etiti obodo ukwu na ụgbọ elu dị elu. Eskişehir na Ankara, nke dị n'agbata obodo ndị a, jiri ụgbọ okporo ígwè dị elu na-arụsi ọrụ ike, karịsịa ebe ọ bụ na e nwere obodo ukwu abụọ ma nwee ọnụ ọgụgụ buru ibu. N'ileba anya n'ikike nke umu akwukwo Eskişehir na Ankara, usoro ihe a bara uru na nchekwa oge maka umu akwukwo. Eskişehir-Ankara High Speed ​​Train Nke a bụ otu n'ime nkwụsị na Eskişehir-İstanbul-Ankara Line. N'ozuzu, ọ ga-ekwe omume na ndị njem ga-eme njem njem 5 na mpaghara a. Otu n'ime njem 6 bụ Eskisehir-Ankara ...
Ankara Konya High Speed ​​Train Ticket Schedules and Schedule 12 / 07 / 2019 Otu n'ime ụgbọ oloko dị elu na-apụ na Ankara bụ Ankara-Konya YHT. Na oru ngo a, nke na-eme ka ndụ dị mfe ma na-azọpụta oge, awa 1 dị n'agbata Ankara na Konya na-ebelata ruo 50 nkeji. Ụgbọ njem a dị elu na-aba uru ma dị mma, karịsịa maka ndị njem na njem na ọzụzụ. TCDD Transportation eji ụdị nkà na ụzụ na usoro nke oge a na-agba ọsọ ụgbọ elu ma nwee ike ijikọta teknụzụ niile n'ime usoro ya na ntụziaka a. Ankara-Konya High Speed ​​Train na-agba ọsọ kwa ụbọchị. Ogologo oge nke ụgbọ elu ndị a bụ 7 hour 1 nkeji ...
Konya Ankara High Speed ​​Train Ticket Schedules and Schedule 12 / 07 / 2019 Ụgbọ okporo ígwè Konya-Ankara High, nke bụ otu n'ime ụgbọ oloko ukwu na-apụ na Konya, bụ ọrụ nke na-eme ka ndụ dị mfe ma na-azọpụta oge. Na ụgbọ oloko a, 1 awa na-aga 50 nkeji n'etiti Konya na Ankara. Ụgbọ okporo ígwè kachasị elu dị nnọọ mma ma na-echekwa ndị njem ga-eme njem na agụmakwụkwọ. TCDD Transportation eji ụdị nkà na ụzụ na usoro nke oge a na-agba ọsọ ụgbọ elu ma nwee ike ijikọta teknụzụ niile n'ime usoro ya na ntụziaka a. Usoro okporo ụzọ Konya-Ankara na-agba ọsọ kwa ụbọchị. Ogologo oge nke ụgbọ elu ndị a bụ 7 awa.
Konya Istanbul High Speed ​​Train Ticket Schedules na Nhazi 12 / 07 / 2019 TCDD Ụgbọ njem na-eme ka ndụ anyị dị mfe site na ụgbọ oloko dị elu ma na-enye ndị njem ya nnukwu àgwà na ọrụ nke oge a site na iji ụdị nkà na ụzụ na usoro nke oge a na ụgbọ oloko dị elu. Konya-Istanbul High Speed ​​Train na-eme njem 3 kwa ụbọchị. Nkwụsị ikpeazụ nke ụgbọ oloko bụ Istanbul Pendik. Oge njem bụ oge 4 na minit 20. Ụgbọ okporo ígwè Konya-Istanbul na-akwụsị dịka Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Arifiye, Izmit na Gebze. Ị nwere ike ịzụta ụgbọ elu na nhọrọ abụọ tiketi na mgbanwe dị iche iche na ụdị 3 dị iche iche. Pulman akụ na ụba na ụgbọ oloko, pulman ...
Istanbul Konya High Speed ​​Train Ticket Schedules and Schedule 15 / 07 / 2019 Kongbọ okporo ígwè dị elu na Istanbul Konya na-agba 3 kwa ụbọchị. Usoro ụzọ ụgbọ oloko a, nke bụbu njem njem nke 2, ka ebugara ya na njem 3 kwa ụbọchị. N'ụzọ dị otu a, a na-enyekwu ndị njem ohere njem. Ebe ikpeazụ ụgbọ oloko ahụ dị bụ Konya. Traingbọ ahụ mezue oge njem na nkeji 4 hour 20. -Gbọ okporo Ugbo elu nke Istanbul-Konya gafere Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozuyuk, Eskisehir dị iche iche. Nwere ike ịzụta ụgbọ elu nwere nhọrọ ọkọlọtọ abụọ na mgbanwe mgbanwe yana 3 dị iche iche ụdị ụgbọ ala wagon. Akụ na ụba Pulman, azụmahịa pulman, azụmaahịa pulman na ụgbọ okporo ígwè Tren
Ikarabul Fast Train Ahịa Ego ole Ego? .. TCDD Ugbu a tiketi Ahịa 13 / 07 / 2019 Ọnụ ego ụgbọ elu Ankara Istanbul dị elu Ego ole? .. TCDD Ahịa Tiketi Ugbu a: insgbọ elu nke elu elu ịbanye na ndụ anyị, na-eme njem dị mfe ma na-atọkwu ụtọ. CDgbọ njem TCDD na-enye gị ohere njem a na-agaghị echefu echefu site na ijikọ ihe niile na mmepe nke teknụzụ na mpaghara a n'ụzọ kachasị ọsọ. Karagbọ Ankara-Istanbul High Speed ​​na-agba n'etiti 6 kwa ụbọchị n'etiti Ankara-Istanbul na Istanbul-Ankara. Traingbọ ahụ na-apụ na Ankara na-akwụsị na Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit na Gebze na-akwụsị ma rute Pendik n'ihe dị ka nkeji 4 elekere 15. Ankara- Istanbul…
Usoro nhazi ngwa ngwa nke 2019 27 / 02 / 2019 Ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ, nke na-eme ka ndụ anyị dị ukwuu na njem ụgbọ njem, nọgide na-ejikọta obodo dị iche iche, ndị njem na ọdịbendị. Akwa ụgbọ oloko na-eje ozi dị iche iche obodo ndị nwere ụdị njem dị iche iche na ụdị ụgbọala dị iche iche na-akwadebe nnukwu ofufe ma nwee nnukwu nkà na ụzụ. TCDD Transportation na-enye gị ohere njem na-enweghị atụ site na ijikọta ọganihu niile na nkà na ụzụ na mpaghara a n'ụzọ kachasị. Nnukwu ụgbọ oloko nke na-enye gị ohere ịbanye n'obodo ahụ dị mkpirikpi karịa ụgbọ ala ahụ na ịga njem n'ụzọ akụnụba karị, ya na ihe ụgbọ ala, ịbụ pulman, azụmahịa na iri ihe ...
2019 Current High Speed ​​Train tiketi Ahịa
2019 zụọ tiketi Ahịa
Ogologo Ogologo Ogologo Ogologo Ogologo
Usoro Ogologo Ogologo Ogologo Ogologo Ogologo
ugwo ugwo ugbo ala uzo
Oge TCDD YHT
Zụọ tiketi Ahịa
ndị njem ụgbọ okporo ígwè na-enwetaghị uru site na ego var.özelleme :: ụlọ akwụkwọ ndị isi na ndị na-enyere aka ... academicians.muhtarlar.sporcular ... members of the press..meclis president ... minister kur chief of staff general. ndị ọkachamara na ndị ọkachamara ... na ndị òtù nke nta akụkọ .. ha bụ ndị ogbenye? Enweghị m ego ọ bụla nke nne na nna. ekwesighi iwepu ya site na ego. Ndị na-enweghị ọrụ na-enwetaghị uru site na ego na nkwarụ adịghị aba uru site n'aka ndị bara ọgaranya na ndị na-agba ọsọ. Akara ukwu nke edeghị ede ebe a na-eritekwa uru site na ego. ... .. A na-eme ka ikike iji mee ihe. idezighari
Konya Istanbul High Speed ​​Train Ticket Schedules na Nhazi
Ikarabul Fast Train Ahịa Ego ole Ego? .. TCDD Ugbu a tiketi Ahịa
Usoro nhazi ngwa ngwa nke 2019